Waxaan Joojiyay Xisaabteydii Basecamp Maanta | Martech Zone
Waagii hore, waxaan ahaa taageere 37 Calaamadaha. Waxaan aaminsanahay inay ka hormareen maalintooda qaabeynta isdhaafsiga adeegsadaha iyo fudeydka. Buugooda, Xaqiijinta, weli saameyn ayuu ku leeyahay sida aan u horumariyo, u qaabeeyo, una dhiso shuruudaha wax soo saarka. Waxaan isticmaalayaa a Basecamp koontada iyo raad raaca dhowr ka mid ah mashaariicdeyda iyo macaamiishayda halkaas ilaa tan iyo xagaagii hore.
Intii aan akhrinayay 37 Calaamadaha blog-ka sanadkii la soo dhaafay, waxaan ogaaday in dhawaaqii balooggu is beddelay si aad ah, oo noqday mid xukun badan oo xaddidan halkii uu ka ahaan lahaa mid wax weydiiya oo sahamiya. Xaaladda, boostadan. 37 Saxiixyadu waxay gebi ahaanba diidayaan codsiyada khadka tooska ah / tooska ah iyadoo loo maleynayo in isku xirnaanta ay tahay wax aan dhammaanteen ku yeelan doonno, meel kasta. Waa tan faalladayda aan ku qoray bogga:
Aragtida aad eegaysaa tan ayaa cidhiidhi ah oo aan si dhab ah u naxay sida taageere 37 calaamadood. Waxaad ku dhex qasaysaa shaqeynta khadka tooska ah iyo kan tooska ah Isku xirnaanta Internetka.
Tani ma aha su’aal la xiriirinayo, waa su’aal ku saabsan maareynta kheyraadka. Haddii aan heli karo codsi ka faa'iideysanaya ilaha laptop-ka si waxtar leh sida kan server-ka, iyo sidoo kale isu dheellitirka isticmaalka baaxadda ballaadhan ee u dhexeeya labada, waxay u abuuri kartaa waayo-aragnimo isticmaale cajiib ah dhammaan dadka ku lugta leh.
Waxaan sidoo kale ku daray qoraal ah in isticmaalka f-bamku gabi ahaanba aan loo baahnayn. Ra'yi ururin aan ku sameeyay bloggeyga, qiyaastii 40% jawaabta ayaa lagu sheegay in aysan jeclayn adeegsiga qashin-qubka websaydhka. Qoraallo badan, waxaan ku arkay iyadoo loo adeegsanayo qaab kaftan ah… laakiin 37 baloogyada calaamadaha waxay ahaayeen iska hor imaad… aniga ii, akhristaha laga yaabo inuu diido iyaga. Waxay ahayd xushmad darro. Ha iga qaldan, waan cuss (aad u badan). Laakiin kuma sameeyo boggeyga oo aan isku dayo inaan kula xiriiro akhristayaashey halkii aan ka fogaan lahaa.
Cayda ma ahan sababta aan u joojiyay Basecamp Xisaab maanta, in kastoo. 12-kii isticmaale ee aan haystay, waxaan ahaa kan kaliya ee runti isticmaalay Basecamp. Waxaan u maleynayaa in saaxiibkey kale uu ku daray hal shay, oo aan ka aheyn inaan ahaa qofka kaliya ee isticmaala sanadkii la soo dhaafay (oo waxaan bixiyay koontada). IMHO, Imtixaanka dhabta ah ee isticmaalka dalabka ayaa ah in dadku runti ay isticmaalaan iyo inkale. Macaamiishayda iyo shaqaalahaygu ma samayn. Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa inay ka fogaadeen isticmaalkiisa sababtoo ah ma ahayn mid ku habboon saaxiibtinimada.
Taasi sidoo kale maahan sababta aan u baajiyay, in kastoo. Dhowr maalmood ka hor, balooggoodu wuxuu soo saaray jajab kale oo jaahil ah: Dadku ma rogaan… emayllada. Waxaa laga yaabaa inay ahayd inay la hadlaan macaamiisha 6,000 ee aan u adeegno kuwaas oo helaya beddelaad aan caadi ahayn iyo sicir-riix illaa emayllo si fiican loo qaabeeyey oo u baahan rogrogis. Aragtida 'Xagga sare laabta' wali wey taagan tahay - macluumaadka ay akhristayaashu arkaan marka ugu horreysa ee ay furayaan emaylku waa waxa ku mashquuliya. Taasi micnaheedu maahan inaysan duudduubneyn, in kastoo! Marka - iyada oo aan wax xog ah lagu taageerin bayaankooda doqonnimada ah, akhristayaasha Calaamadaha iyo Buuqyada blog hadda way rumaysan doonaan iyaga waxayna qori doonaan emayllo aan macluumaad ahayn, waxtar lahayn, si fiican loo qaabeeyey, iwm… dhammaantood maxaa yeelay qaar ka mid ah blogga ayaa u sheegay in kani yahay kan saxda ah jawaab.
Sababta aan u baajiyay akoonkeyga Basecamp ayaa ah in aan ka aamin baxay 37 Signal. Ma hubo inay kibir ka tahay koritaanka iyo guusha shirkadooda, laakiin dhalaalkoodu wuu dhalaalayaa. Weli waxaan taageersanahay qaar ka mid ah shaqooyinka fudud ee barnaamijyadooda… laakiin codsiyada guud ahaan uma muuqdaan inay badalayaan muuqaalka sidii ay horay u sameyn jireen. Arag mar dambe, 37! Waxay ahayd madadaalo inta ay socotey.
Si la yaab leh, waxaan u wareegay iGTD, oo ah barnaamij desktop ah.
Tags: 37 calaamadahaBasecamp
Sirta Google PageRank ayaa la xaliyay
Apr 7, 2007 at 6: 22 PM
Anigana sidoo kale, mudane, waxaan ka xumaaday qoraalka 37Signal. Waxay sidoo kale meel ka dhac ku tahay waddanka soo koraya.
Apr 7, 2007 at 8: 58 PM
Waan ku raacsanahay iyada oo aan loo baahnayn in lagu dhaarto baloogyada, haddii aadan fikirkaaga ka gudbin karin adigoon caytamin, markaa dhibicdiisu maaha mid xoogan.
Waxay umuuqataa in halkaa loo dhigay si loo helo falcelin, maadaama aan ogaaday inay jiraan ku dhowaad 200 oo faallooyin oo kujira 37 baloogyada calaamadaha.
Apr 7, 2007 at 10: 14 PM
Istefanos - wuu ogolaaday. Marka la eego dhaarta, waa qeybta ixtiraamka ee aanan fahmin. Waxyar oo hibo ah, wali waad ka nixin kartaa qof, inaad daacad noqotaa oo hufan tahay, laakiin wali waad ixtiraamaysaa. Ma fahmin sida dhaartu weligeed run ahaantii uga faa'iideysan karto baloog shirkadeed.
Apr 7, 2007 at 10: 02 PM
Waxaan si joogto ah u aqrin jiray barta 37Signals, laakiin aad ayaan uga xumaaday iyada iyo dadka ka dambeeya. Akhyaarta akhyaarta ah, waana ku qanacsanahay diiradooda sahalnimada iyo diirada saarida isticmaaleha. Laakiin - oo la mid ah wixii aad xustay - xoogga saaridda balooggu wuxuu noqday mid gaar u ah gooni-isu-taagga iyo u-xaglinta (“waanu sax nahay, qof kasta oo kale doqon uun buu yahay”), waxaanan u arkay inay is-hoosayso oo ay dhibayso
IMHO, dadka ka dambeeya 37Signals waxay u gacan galeen wax umuuqda wax wada caam ah maanta… fikirka ah in, si fiican, maxaa yeelay shirkaddayada OUR ayaa guuleysatay, markaa habka aan wax u qabanayno waa habka saxda ah qof walbana wuu ku celin karaa guusheena adoo baranaya qaababkeena.
Hogwash. Waxaa jira dad si naxdin leh u muuqda dad aad u qurux badan iyo shirkado cajaa’ib leh oo u soo baxay nasiib xumo ama waqtiga oo xun iyo sidoo kale dad si mucjiso leh u qoslaya iyo shirkado karaahiyo ah oo ku guulaystay nasiib xumo iyo waqti fiican awgeed. Dad aad u tiro badan ayaa guud ahaan u maleynaya isku xirnaansho iyo sababo aan macquul ahaan jirin.
Waxaan doorbidayaa habka is-hoosaysiinta: Waa tan wixii aan samaynay, waa kan waxa ay shirkadeennu qabatay… ka qaad wixii aad rabto. Waxaa laga yaabaa inay adiga wax weyn kuu tari laheyd, laga yaabee inay tahay ikhtiyaar aad u xun shirkaddaada… sida ugu fiican ee aad u ogtahay.
Apr 7, 2007 at 10: 09 PM
Qodobbo waaweyn, Aadan.
Waxaan u maleynayaa mid ka mid ah casharrada tan ay tahay in balooggu labadaba u noqon karo duco ama habaar shirkaddaada. Haddii aad tahay qof xun… markaa bartaada internetka ayaa laga yaabaa inay taasi muujiso. Dadku ma jecla inay la shaqeeyaan jerks. Qaabka baloogyadooda ayaa runtii ii diiday shirkadooda oo dhan.
Waxa xiisaha lihi waa akhrinta bishii ugu dambaysay ee gelitaanka oo aad barbar dhigtaa buugga, Helitaanka Real. Codku aad buu uga duwan yahay bilowgooda is-hoosaysiinta.
Apr 7, 2007 at 11: 13 PM
Waan ku faraxsanahay inaan arko inaanan ahayn qofka kaliya ee ogaaday in macaamiishooda aysan waligood isticmaalin Basecamp, laakiin aysan waligood geli doonin.
Apr 8, 2007 at 6: 26 AM
Waxay u egtahay inaad aqrisay maskaxdayda, ka dibna aad ugu qortay qaab aad u kooban oo ka badan intii aan kari lahaa.
Aniguba sidoo kale, kamaan qorin laga bilaabo 37s dhowr bilood ka hor sababo la xiriira 'waan saxanahay, qof kasta oo kale wuu qaldanyahay - na fiiri, miyaanay ahayn kuwa cajiib ah'. Murugo, runtii. Shaki la'aan waa dad karti badan.
Apr 8, 2007 at 8: 48 AM
Sidoo kale ogow inay soo xigteen Mark Hurst / Khibrad Wanaagsan waagii hore, waxaanan aaminsanahay inay ka hadleen Shirkiisii ​​Gel. Warsidaha Khibrada Wanaagsan waa mid ka mid ah emayllada ugu dheer ee aan helo… waxaana caadi ahaan ku dhex wareegaa eray kasta oo ka mid ah.
Apr 8, 2007 at 10: 54 AM
Qodobbada qaarkood: Waxaan gebi ahaanba ku raacsanahay isbeddelka codka, waana ka xumaaday sidoo kale. Xaqiiqdii kuma akhriyo SvN maalin kasta xamaasaddii aan u qabay. Si kastaba ha noqotee, waxaan jeclaan lahaa inaan soo bandhigo xoogaa dhibco ah:
1. Uma dhawaaqi doontid macaamiisha bartilmaameedka ah Basecamp, gaar ahaan haddii aad ku beddeli karto shaqadeeda barnaamij kaligood ah oo desktop-ka ah. Hadana haddii macaamiishaadu aysan soo galin, waxay u badan tahay inay helayaan baahidooda PM meel kale.
2. Re: afxumo, waa bloggooda. Ilaa inta aan ka walwalsanahay, waxaan door bidaa in aan si toos ah u helo nuxur daacadnimo ah inta aan ka aqrin lahaa qashinka cad ee aad meel walba ka aqriso.
3. Waxay u maleeyeen inaysan caddeyn, waxaan u maleynayaa inay si gaar ah u tixraacayaan emayllada diiwaangelinta / hordhaca, ma ahan guud ahaan iimaylka suuqgeynta. Xusuusnow mid ka mid ah yoolalka ay hiigsanayaan ayaa ah inay noqdaan sida ugu macquulsan uguna macquulsan isla markaana u yareeyaan jahwareerka isticmaalaha iyagoo ka takhalusaya baahiyaha taageerada meel kasta oo lagama maarmaan ah. Haddii ay dhajinayaan tan, waxay u badan tahay inay arkeen codsiyo badan oo taageero ah oo ka yimid dad aan si buuxda u aqrin e-maylada loo soo diray. Ma hubo waxa dhiirrigelinta ah ee ay halkan ku jiifsanayaan. Jawaabtaadana waxay igu dhufanaysaa * xoogaa * difaac ah iyo POV-ka iimaylaha suuqgeynta (i sax haddii aan khaldanahay).
Apr 8, 2007 at 11: 33 AM
Waa salaaman tahay SirZ! Dhammaan qodobbada wanaagsan, aan ka jawaabo:
1. Malaha. Kaliya waxaan aaday barnaamijka desktop ilaa aan kahelo qalab kale oo maareynta mashruuca / maareynta wax soo saarka ah. Waxaan aaminsanahay inay jiri karto barnaamij weyn oo banaanka ka jira oo lala wadaago macaamiisha - kaliya waxaan ku kalsoonahay in Basecamp aysan ku xukuminayn jawaabta macaamiishayda. Emailku wali wuxuu ahaa habka ugu muhiimsan ee lagula xiriiro waxa-qabadka, yoolalka mashruuca, dokumentiyada, iwm.
2. Dhamaan waxaan u ahay daah furnaan, laakiin waxaad kaheli kartaa fikirkaaga adigoon caytamin. Ujeeddadayda tan ayaa ah in aan loo baahnayn iyo doono ka fogee dadka qaarkiis ee laga yaabo inay jecel yihiin wax soo saarkaaga iyo shirkaddaada. Si fudud waa xushmad ixtiraam leh.
3. Gabi ahaanba waad saxantahay, jawaabtaydu waa mid difaac ahaan iimeel ahaan suuq ahaan. Dunida IT-du waxay u egtahay inay u kala qaybiso isgaarsiinta emaylka laba qaybood: hawlgal iyo suuqgeyn. Hadday ujeeddadoodu tahay in E-mayllada Hawlgalku aysan rogrogmin, markaa waa inay siiyaan xoogaa aasaas u ah ra'yigaas. Si fudud u sheegistu run ma ka dhigayso.
Iyada oo ku saleysan macaamiisheenna, xaqiiqadu waxay u muuqataa wax badan oo ka duwan. Ma haysto xog adag oo aan ku taageero mucaaradkayga, laakiin waaya-aragnimadayda shaqsiyeed waa iska soo horjeed. E-mayl hawleed ku saabsan sida loo diiwaangeliyo ayaa ah kaamil ah meel looga faa'iideysto nuqul HTML dheer oo leh shaashadaha shaashadda, sharraxaada, iyo dhaqamada kale ee qaabeynta weyn. Waxaa laga yaabaa inaan ku doodi karo in emaylka hawlgalka uu yahay meel aad uga fiican rogrogmada marka loo eego emaylka suuq geynta maaddaama macmiilku runti rajaynayo inuu helo isgaarsiinta!
Sidoo kale waa fursada ugufiican ee kor uqaadida iyo fursadaha iskutallaabta. Waxaad haysataa macaamil ku hawlan oo laga yaabo inuu qadariyo shey ama adeeg bixin dheeri ah oo ku saleysan waxa kujira iimaylka aad diraysid.
Apr 16, 2007 at 12: 40 PM
Xalka weyn ee khadka tooska ah ee aad ku martigelin karto naftaada (ama adeegso adeeggooda martigelinta) waa Mashruuca Copper. Waxay leedahay seddex dhadhan oo si isdaba-joog ah qaali u noqota iyadoo kuxiran baahidaada. Waxaan ogaadey in 90% kiisaskeyga nooca Standard uu si weyn u shaqeeyo.
Waxaan sameeyay tijaabada Basecamp oo si saraaxad leh uma aysan noolaan balan qaadkii ahaa in buunbuuninta oo dhami ii horseeday inaan rumaysto. Weli waxaan dhibaato ku qabaa inaan helo iyaga inay joojiyaan biilka kaarka deynta sidoo kale si xun uma caawinayaan dhammaadkooda.
Adeegga macaamiisha qayb kama aha 37Signals lexicon oo aan ka helo nooc murugo leh maxaa yeelay waxay wateen mowjad aad u ballaaran oo PR weyn iyo niyad wanaag guud ah. Akhrinta balooggan iyo kuwa kale waxay umuuqataa inay bilaabeen inay baabi'iyaan aragtidooda ku aadan suuqa. kaliya murugo.
Apr 18, 2007 at 12: 52 PM
Kaliya cusbooneysiin. David Heinemeier Hansson wuxuu si naxariis leh dib ugu soo celiyey labadii bilood ee dacwadaha kaararka amaahda ee aan ku murmayey. Waxaan u maleynayaa in howshu ay aad uga dhib badneyd sidii loo baahnaa.
Waxaan rajeynayaa inay fahmeen waxa ay noo metelaan. 37Signals runti waxay ka mid noqdeen caruurta / shirkadaha boodhadhka dhaqdhaqaaqa web2.0 waana wax laga xishoodo in la arko sawirkaas wasakhaysan.
Waa kuwan qormooyin kooban oo ka mid ah Manifesto Cluetrain oo u muuqda kuwo si gaar ah quseeya…
18 Shirkadaha aan ogayn in suuqyadooda ay hada isku xidhayaan qof-qof, ku kasbashada caqli ahaan natiijada oo si qoto dheer ugu biirtay wadahadalka ayaa luminaya fursadooda ugu fiican.
21 Shirkaduhu waxay u baahan yahiin inay khafiifiyaan oo ay naftooda si dhab ah u qaataan. Waxay u baahan yihiin inay helaan dareen kaftan ah.
89 Waxaan leenahay awood dhab ah waana ognahay. Haddii aadan si fiican u arkin iftiinka, qaar kale oo dhar ah ayaa soo raaci doona taas oo ah mid feejignaan badan, xiiso badan, xiiso badan oo lagu ciyaaro.
95 Waan soo toosaynaa oo isku xirnaa. Waan daawaneynaa. Laakiin ma sugeyno.
… Iyo Nordstroms…
Wax ku sax macaamiisha haddii kale waa lagaa tagi doonaa
Sep 24, 2008 at 1: 25 PM
Isaga ... sidaa darteed, dhaarantu waa mid daacad ah oo aan dhaarantu daacad ahayn?
Apr 8, 2007 at 2: 07 PM
Waxaan aaminsanahay 37Signals ilaa buugoodii waxaanan u maleynayay in khudbaddoodii muhiimka ahayd ee SXSW sanadkii hore ay ahayd mid aad u fiican. Taasi waxay tiri, waxaan u maleynayay inaan ahay kan kaliya ee ka helay Basecamp wax ka yar sida ugu fiican. Weli waan isticmaalaa maalin kasta laakiin waxaan bilaabay inaan ka baqo halkii aan ka dareemi lahaa nafis ah inaan jabiyay silsiladaha barnaamijyadayda desktop-ka. Ilaa iyo inta codka boggooda tagayo, runti kama hadli karo maaddaama aan ahay aqriste-joogsi caadi ah, laakiin waxaan si xoog leh u dareemayaa in qof kasta oo ku habaara goob "xirfad-yaqaan" ah uu isku dayayo inuu ku adkaado inuu la ciyaaro qabow caruurta.
Apr 8, 2007 at 2: 34 PM
Aniga qudhaydu waan la yaabay markaan arkay iyagoo adeegsanaya bambo F-ta meeshooda. Sidaad si sax ah u sheegtey, waa mid aan loo baahnayn, ugu dambaynna waa dhalinyaro. Cunsurka "qabow" ee ka-hortagga aasaasku wuxuu bilaabay inuu xirto dhuuban waqti hore. Isla macno ahaan inay tahay boggooda, sida SirZ tilmaamay, si kasta ha noqotee, uma maleynayo inuu qofna sheegayo inaysan xaq u lahayn inay sidaa sameeyaan, laakiin taasi kama dhigeyso caqli, mana sameyn karto Waa inaan aqbalaa shaqsiyan.
Buugoodu wuxuu igu ahaa kaftan. Sheeko ka timid shakhsiyaadka u dhiirranaa geesinimada darteed. Xaqiiqdii horjoogayaasha badankood warshadaha oo dhan lama socdaan kuwa guud, laakiin dabeecada f-off waa wax lagu qoslo. Maya, inaad u fududaato daryeelaad ahaanshuhu marwalba MA ahan fikrad wanaagsan.
Sidoo kale marwalba waxaa i haleelay hamigooda Rails, ama la'aanta arintaas. 37 Calaamado ayaa lagu sheegay dhowr jeer in aysan dooneyn in biraha ay noqdaan kuwa guud ama “aad u guuleysta”, fanboyskuna way cunaan. Hubaal… heer maamul oo laga yaabo inay fiicnaan karto… laakiin aan noqonno kuwa waxqabadka leh. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee Ruby iyo gaar ahaan kuwa soosaarayaasha Rails ay wajahayaan ayaa ah dhif iyo naadir ku ah bay'ada oo si fudud loogu dejiyo iyaga si ay uga faa'iideystaan. Ruby kaliya malahan meel kasta oo ay PHP, ama xitaa Python leedahay. In kasta oo horumarka laga yaabo inuu yahay hiwaayad, waxaan inta badan u sameeyaa si aan lacag u helo. Nasiib ayaan ku leeyahay inaan helo waxa aan nolosha u jeclahay, laakiin weli waxaan u baahanahay inaan bixiyo biilasha iyo quudinta carruurta. Weydiinta dadka inay iimaanka, dadaalka iyo kheyraadka noocaas ah geliyaan wax, ka dibna u sheegto inaadan dooneynin inay u guuleysato sida ay noqon karto… sidaas darteed la kordhiyo faa iidada isticmaalkeeda… waxay ila tahay aniga sida aniga oo kale.
37 Saanado hore ayaa sumoobay hubris. Waxaan la yaabanahay inay dadka ku qaadatay waqti dheer inay bilaabaan inay arkaan. Waxay u jiraan mashiin suuq geyn ah inta badan naftooda.
Apr 8, 2007 at 2: 54 PM
Hal shay oo kale ayaan doonayay inaan tilmaamo SirZ. Iyadoo aan loo eegin awoodda Karr ee suuq-geynta emaylka, anigu kama dhaleeceyn doono ra'yigiisa si cad. Sidoo kale garo in taasi u oggolaaneyso isaga aragti iyo aqoon ku saabsan warshadaha iyo waxa ka waxtar badan kuwa kale, oo aad adigu ka mid tahay, iyo 37 Calaamadaha. Fikradaha kaligood lacag kaaama dhigayaan, natiijooyinka ayaa lacag kaa dhigaya… iyo haddii hababka Mr Karr ay natiijooyin u keenaan, yaad tahay adiga oo kaa dhimaya
Apr 8, 2007 at 2: 56 PM
Waan ku raacsanahay qaabka uu u noqonayo boggooda 'aad u wada garaneyso' iyo luminta u hanqaltaagga si aan wax walba u saxo. Waxaan sidoo kale dareemay in hordhaca Highrise oo aad loo buunbuuniyey, oo si ka badan loo qiimeeyay hada markaan aragnay. Weli waxaan haystaa koontadayda Basecamp, laakiin si taxaddar leh ayaan u daawanayaa.
Apr 8, 2007 at 3: 35 PM
Hal shay oo runtii iiga xanaaqay 37signals waa ololahooda suuqgeynta dadka isticmaala 1,000,000 ee Basecamp. Maaha mid aad u daacad ah, maadaama aan fiicanahay boqolkiiba aad u tiro badan oo aan ahayn isticmaaleyaal firfircoon.
Waxaan haystaa ugu yaraan 4 koontooyin Basecamp oo kala duwan, waxaanan kaliya isticmaalay mid ka mid ah bilihii ugu dambeeyay. Sidaada oo kale Doug, waxaan u arkaa in mashruuc kasta ay jireen adeegsadayaal faro ku tiris ah oo aan waligood soo galin, ama kaliya soo galin hal ama laba jeer si loo hubiyo.
Oo tan iyo markii aanu jirin wax toos ah oo demo ah, waxaan hubaa in dad badani iska diiwaangeliyaan koontada bilaashka ah si ay u hubiyaan softiweerka, oo aakhirka aan u isticmaalin wax run ah.
Apr 8, 2007 at 4: 50 PM
Taasi waa qodob aad u xiiso badan, waxay i xasuusinaysaa tirinta macaamiisha wargeysyada;). Waxaan si dhab ah ula yaabay falcelinta weyn ee qoraalkan! Waxay u egtahay in dad aad u tiro yar ay sugayeen gole ay ku muujiyaan qanacsanaantooda.
BTW… hal qof oo kale oo aan ka hadlay ayaa ahayd adiga. 😉
Apr 8, 2007 at 6: 03 PM
Qodobbo xiiso leh. Waad ku mahadsan tahay maqaalka. Had iyo jeer xiiso leh in la arko aragtida kale (waxyaabaha ugu badan ee qofku ka akhriyo 37signal khadka tooska ah waa ammaan dhalaalaysa).
Ugu dambeyntii waan joojiyay akoonkeyga Basecamp sidoo kale, laakiin inbadan oo aan ku sameeyo xaqiiqda ah in shaqeynta kaliya aysan aheyn wixii aan u baahnaa.
Waxaad ka heli kartaa qodobkaan mid xiiso leh:
37Signal: Bloat Business iyo Feature Bloat
Apr 8, 2007 at 10: 33 PM
Waxaan ka wareegnay Basecampe oo bilaash ah (oo ka fudud) TaskFreak usbuucii la soo dhaafay. Waan jecel nahay, oo gadaal gadaal uma eegayno.
Apr 9, 2007 at 4: 03 AM
Tani waxay i xasuusineysaa inaan u baahanahay xisaabteyda. Kama aanan isticmaalin bilooyin waxayna had iyo jeer ka mid ahayd waxyaabahaas aan doonayay inaan isticmaalo laakiin waligey ma sameyn.
Eeg ya Basecamp.
Apr 9, 2007 at 9: 39 AM
Sidoo kale waa la joojiyay.
Marar dhif ah ayaa loo isticmaalay, sidoo kale macaamiishaydu ma aysan qaban (sida lagu caddeeyey taariikhaha soo galitaanka ugu dambeeya). Waxaan wacay subaxnimadan, aniga oo i weydiinaya haddii aan sii wado. Waxaan layaabay (?) Midkasta oo kamid ah (4) wuxuu dhahay MAYA!
PS, emaylkayga iyaga:
"Wax shaqo kuma laha muranka 'f-word' oo dhan,
waad habaari kartaa inta aad jeceshahay oo dhan, sidaas oo kale anigu
Dhibaatadu waxay tahay inaan is qabtay anigoo habaaraya INTA AAN isticmaalayo
aaladahaaga waana ku adkaatay inaan helo / haysto
macaamiishayda si ay u isticmaalaan BackPack.
Dhawaan waxaan lumiyey mashruuc / macmiil jidadka dhexdooda dar dar xun
isgaarsiinta (iyo BackPack ayaa door weyn ka ciyaaray tan).
Wareysi aan rasmi aheyn ayaa subaxnimadii maanta shaaca ka qaaday DHAMMAAN macaamiisheyda kale inkaar ayaa sidoo kale ah, marka go'aanka ayaa sahal ahaa easy
FYI, qaar ka mid ah / aqoontooda:
- Isku-darka emaylka iyo mashruuca 'caadiga ah' waa xun yahay /
aan jirin (waxay u egtahay in HighRise's cc-email laga yaabo inay tahay
xoogaa xal ah)
- Goobtu si fudud ayey gaabis u tahay
- Faylasha-nuqulku kuma filna oo waa aasaasi
- Qalabka si sax ah looma mideynin (looxyada wax qora, 1 sano kadib, wali waa friggin 'meta-refresh ?, marka badhanka biraawsarka fudud ee gadaal uma shaqeeyo)
- Looxyada wax lagu qoro, qeybta aan ugu jeclahay bartaada, waxay la ildaran tahay buggy, aaladaha qaabeynta fudud (hal macmiil ayaa ii sheegay inay saacado qaadatay sidii ay u heli laheyd liisaska tusmada saxda ah)
- Ugu dambayn laakiin hubaashii uguyaraan, sidaan hadda ogaaday, dhoofinta xogta waa RIDICULOUSLY BAD. WTF waxay danaynaysaa dhoofinta XML, laakiin wali waa inaan si gooni ah u soo dejiyaa faylasha oo dhan, si gooni gooni ah u xafidaa qoraalada, iwm. ”
Waxaad kahoreyn jirteen qalooca, laakiin waqtiyadan ayaa ah waqtiyo deg deg ah waxaanan filayaa inay tahay waqtigii isbarasho daacad ah.
Apr 9, 2007 at 10: 34 AM
Diiwaanka marna ma dhihin "sax ma nihin, qof kasta oo kale wuu qaldan yahay" mana rumaysanayno "sax ma nihin, qof kasta oo kale wuu qaldan yahay"
Waxaan si fudud ula wadaagnaa wixii noo shaqeeyay. Haddii dhammaantood ay kuu shaqeynayaan, wey fiicantahay. Haddii qaar ka mid ahi adiga kuu shaqeeyaan, wey fiicantahay. Haddii midkoodna uusan kuu shaqeynin, waa weyn tahay. Qaado waxkasta oo qiime ah oo aad heshid oo inta hartay gadaal uga tag.
Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad dib u eegis ku samayso cutubkan ka socda buuggeenna:
Aad baad u aragtaa aragti madow iyo caddaan ah. ”
Haddii codkeenu u muuqdo mid aad u yaqaan-it-allish, nala samir. Waxaan u maleyneynaa inay kafiican tahay in fikradaha lagu soo bandhigo dharbaaxo geesinimo leh halkii aad noqon laheyd rajo-la'aan. Haddii taasi u soo baxdo sidii nasiib ama isla weynaan, sidaas ha ahaato. Waxaan ka doorbidi lahayn daandaansi intaan wax walba biyo ku hoos siinin “way ku xiran tahay…” Dabcan waxaa jiri doona waqtiyo xeerarkan loo baahan yahay in la kala bixiyo ama la jebiyo. Xeeladahaas qaarkoodna ma khuseeyaan xaaladdaada. Isticmaal garashadaada iyo male-awaalkaaga.
Apr 9, 2007 at 11: 24 AM
Marka hore - aad ayaad ugu mahadsantahay jawaabtaada. Marnaba kuma fikirin in qoraalkan yar uu sidii hore u dhici doono. Waxaan rajeynayaa inaad fiirin karto wixii ka baxsan sheegashada aad ku tilmaamtay buuggaaga oo aad dhageysatid waxa dad yar ay ku dhahayaan qoraalkan.
Tan iyo markii aad soo xiganeysid buuggaaga, waxaan ku tuuri doonaa tixraacyo kooban:
1. Waxay u egtahay inaadan sameynin shaqaaleeyaan macaamiisha saxda ah.
2. Kaaga shakhsiyadda badeecadaada waxaa laga yaabaa inay leeyihiin cillado qaarkood oo u baahan in la fiiriyo.
3. Raacitaanka Mawjadda Blog wuxuu leeyahay kor iyo hoosba.
Sidii aan ku idhi qoraalkeygii asalka ahaa - Helitaanka Real ayaa istaagtay imtixaanka waqtiga welina waxaan ahay taageere weyn. Runtii waan la tartami lahaa kooxdaada inay dib u eegaan aragtida bartaada, in kastoo. Runtii waa mid adag oo waxaan ku kalsoonahay in hoos loo dhigi karo si looga caawiyo barashada dadka kale oo aan loogu qaylin iyaga.
Apr 9, 2007 at 11: 19 AM
Aniga naftayda, waxaan joojiyay inaan noqdo macmiil 37S ah oo ku saleysan khibrada taageerada. Kadib markaan dhib kuqabsaday dejinta qaar ka mid ah mashruucyada Basecamp, waxaan ku qoray si aan u waydiiyo sababta mashaariicda loo tusay inay leeyihiin macaamiishaydu halkii aan ka ahaan lahaa. Jawaabtu waxay ahayd hal-ku-dhig safka “Hi Todd. Mashruucu wuxuu xiriir la leeyahay macmiilka maxaa yeelay waa kaas mashruuca lala xiriirinayo ”ama wax si caddaalad ah ugu dhow taas. Wareeg ah, aan waxtar lahayn, iyo masaafo ka fog baahida dhabta ah, ee ahayd in la ogaado sida loo beddelo (duh).
Codsi labaad oo taageero ah ayaa helay daaweyn la mid ah - soon, jawaabta barta aan waxba ka qabanaynin, safka "waa sida ay tahay waayo taasi waa sida ay tahay." Codsi ah in wax laga beddelo barnaamijka ka bixitaanka xiriirkaas ayaan laga jawaabin.
Qaadashada aniga ahaan waxay ahayd dareen ah 'haddii aad dhibaatooyin ku qabtid naqshadeyntayada, aad meel kale,' ama ugu yaraan ha ku qorin.
Apr 9, 2007 at 12: 21 PM
Douglas, balooggeena wuxuu ahaa mid lamid ah tan iyo sanadkii 1999. Bloggeena wuxuu qaadaa isla codka aan u isticmaalno inaan kuwada hadalno dhexdeena. Uma abuurinno shaqsi xir xiran oo loogu talagalay isgaarsiinta bulshada. Waxaan nahay cidda aan nahay - marxaladda iyo dibedda labadaba. Marmarsiinyo ma sameyno. Aad ayaan ugu faraxsanahay taas. Waxaan jeclaan lahaa in dad badan iyo shirkado ay sidaas noqdaan.
Waxaan wadaagnaa fikradaheena feker la'aan. Taasi waa sidaan had iyo jeer wax u qaban jirnay oo aan u sii wadi doonno inaan wax qabanno. Waxaan aaminsanahay inay kafiican tahay inaad ahaato naftaada intii aad noqon laheyd qof kale - duruufta ha ahaato. Mararka qaarkood waan dhaarannaa. Heshiis weyn. Mararka qaarkood waxaad noogu yeedhaan “jaahil”. Heshiis weyn. Labaduba si siman ayey u weeraraan haddii aad raadineyso fursad aad ku xumaato.
Marnaba iskuma dayin inaan ka farxino qof walba. Waxaan fahamsanahay in dadka qaarkiis aysan jeclayn sida aan u hadalno ama sida aan u fikirno ama aan u dhaqano. Taasi waa fiican tahay. Waxaa jira dad badan oo aan adiga ku jeclayn. Taasi waa fiican tahay. Taasi waa nolosha.
Maadaama aad noo hayso jawaab celin, adiga waxaan kuu hayaa jawaab celin. Waxaad tiri: “Dhowr maalmood ka hor, balooggoodu wuxuu soo saaray jumlad kale oo jahli ah.” Ku saabsan: http://www.37signals.com/svn/posts/357-people-dont-scrollemails
Dadka nagu raacsan faallooyinka ma iyagaa jaahil ah? Miyaad ku qanacsan tahay inaad dadkaas oo dhan ugu yeerto jaahil sidoo kale? Richard Bird ma jaahil baa? Steven Bao ma jaahil baa? Ben Richardson ma jaahil baa? Amie Gillingham ma jaahil baa? Dave Rosen ma jaahil baa? Scott Meade miyuu ka socdaa 'Concept Share' ma yahay jaahil? Anthony Casalena ma ka yahay SquareSpace isna jaahil? Josh Williams ma BlinkSale baa jaahil ah? Miyaad faallo ku qori lahayd bartaada ama tayada adoo dhahaya dadkaas oo dhami waa jaahil sidoo kale? Mise hadalkaaga gadaal ma istaagi doontid? Ma waxaad u jeeddaa waxaad leedahay?
Ryan miyuu jaahil ka yahay soo dhajinta tan?
Waxaad ubaahantahay inaad udhigato “jaahil” faallooyinka uqalma sida cunsuriyada, nin jeclaysiga, ajnabi nacaybka - ma ahan fikirka qof ee dhererka emaylka.
Apr 9, 2007 at 12: 45 PM
Dabcan dadkaasi maahan jaahil. Iyagu ma haystaan ​​mimbarka cagajuglaynta leh ee bartaada internetku leedahay. Waxay si fudud uga faaloodaan una taageeraan iyagoo ku saleynaya rayigooda shaqsiyeed. Ryan ma aha jaahil, sidoo kale. Isagana wuu dhiibanayaa fikirkiisa. Waan ixtiraamayaa taas. Dabcan, qaarna, aragtidaasi waa xaqiiq. Waxaa laga yaabaa in dadkaasi ay tijaabiyeen oo ay ku guuleysteen habkaas.
Qoraalkaaga looma soo bandhigin fikrad ahaan, waxaa loo soo bandhigay sida xaqiiqda ah. Waxaan aaminsanahay inay jahli ahayd. Jaahilnimo waxaa lagu qeexaa sida aqoon la’aan ama macluumaad la’aan maaddo ama xaqiiq gaar ah. Wax shaqo ah kuma lahan cunsuriyadda ama nin jeclaysiga, iwm.
Run ahaantii, run ahaantii looma baahna in laga jawaabo, Jason. Markaad ka jawaabto jawaabtaada, sheegashadaydu dhammaantood waa run. Codku wuu is beddelay. Taasi waa wax aad u xun. Nasiib wacan adiga iyo shirkaddaada.
Apr 9, 2007 at 12: 42 PM
Waxaan u maleynayaa in wax caydu tahay wax aan jirin. Xaaladdan oo kale, waxay ku dartay xoojinta ku habboon. Carruur ma nihin. Waxaan uhadalnaa sidan. Ama ugu yaraan waan sameeyaa.
Laakiin 37 baloogyada 'blogs' ayaa iiga garaacaya sidii qof khiyaano badan. Nooca noocan ah "waxaan ogaanay sida khaldan ee ay wax uga jiraan waxyaabahan" vibe.
Apr 9, 2007 at 1: 20 PM
Douglas, hadda waxaad u egtahay sida guuldarro xanuun. Jason wuxuu u yimaadaa bartaada internetka si uu uga tago faallooyinkiisa oo hadda waxaad u sheegtaa inuusan ka jawaabin? Waa dhaqan noocee carruurnimo ah taas?
Waxaad sidoo kale ku gaartey adoo soo jeedinaya in boostada Jason lagu sheegay inay tahay run. Waa fikir ku saleysan khibradiisa. Waa op / ed (ra'yi / tifaftir) gabal. Daraasad cilmiyeed waa xaqiiqo. Uma maleynayo in Jason waligiis u tixgelin doono in qoraalkiisa uu yahay mid cilmiyeysan, ama xaqiiqo ah, ama wax kale oo aan ka aheyn si fudud ra'yigiisa oo ku saleysan khibradiisa.
Kahor intaadan dhaleeceyn, maxaad naxariis u weyddiin weyday inay tahay fikirkiisa ama xaqiiqadiisa? Waan hubaa inuu ku farxi lahaa inuu ku jawaabo. Markaa xog badan ayaa lagaa siin doonaa ujeedkiisa. Waad fikiri kartaa ama runta waad ogaan kartaa.
Ugu dambeyntiina, ma arko sidaad si macquul ah ugu doodi karto in hal qof jaahil yahay laakiin dadka kale ee ku raacsan ayan ahayn. Dhib malahan cidda dhahday horta ama meesha ay ka yiraahdeen. Dhamaantood way isku raaceen. Faallooyinka waxay taageerayaan booska Jason. Markaa ama waad rumaysan tahay inay dhammaantood jaahil yihiin ama midkoodna aanu jaahil ahayn. Ma jecleyn kartaan inaad xulato markii ay wada oggol yihiin.
Apr 9, 2007 at 2: 20 PM
1. Re: Khasaare Nabar - Xanuun? Haa. Waxaan qoray qoraal si aan u keeno walaacyadayda aniga oo ah macmiil hore isla markaana milkiilaha shirkaddu u yimaado barteyda oo uu eryo. Wuxuu sidoo kale ceyriyaa qof kasta oo kale oo si xun u faalleeyay. Taasi waa nasiib darro - waxaan rajeynayey inbadan. Guuldareystay? Haa. Waxaan lumiyay waqti iyo lacag maalgalinta aalad aanan dib u isticmaali karin.
2. Jason wuxuu sheegay in tani ay ahayd ra’yi, wuxuuna raacay cutubka 1aad ee buugiisa wuxuu sheegayaa in balooggu yahay ra’yi. My aragtida (taasi waa ra'yigeyga) wuu ka duwanaa waana muujiyey sidaas.
3. Jason wuxuu sheegay inuu ahaa ra'yi halkan, uma baahnin inaan weydiiyo. Sidoo kale, xusuusnow sababta aan u baxayay ma ahayn qoraalkan si fudud - waxay ahayd isbeddel xagga codka ah iyo luminta ixtiraamka SvN iyo sidoo kale in aan la isticmaalin software-ka igu hoggaaminaya inaan ka tago. Ma ahayn dhacdo keliya, way badneyd.
4. Re: Jaahil: Adigu waxaad igu taageertaa dooddayda adigoon ogeyn. Haddii SvN ay soo saarto bayaan buste ah oo aan cidna emayl u rogin, hadda dadku waxay u eegi karaan taas mid dhab ah haddii sidaas lagu soo bandhigo. SvN waa jaahil soo bandhiggaas, taageerayaashu maahan. Waxaa laga yaabaa in si qaldan wax loogu sheego, laakiin ma ahan jaahil. Waa si sax ah sababta aan uga horyimid aragtida SvN - baloogyada waxay u baahan yihiin in lagu qabto hawsha markii 'ra'yigooda' loo soo bandhigo sida dhabta ah.
Waad ku mahadsan tahay booqashada!
Apr 9, 2007 at 1: 41 PM
dadka qaar waxaad moodaa inay jaahil ka yihiin jahliga.
Apr 9, 2007 at 2: 25 PM
Mahadsanid, Lupe. In kasta oo aanan u eegin Wikipedia dhammaan jawaabahayga, haddana waxaan jeclahay xigashada:
Qeexitaan kale ayaa sheegaya in jahligu yahay xulashada in aan la dhaqmin ama loo dhaqmin si waafaqsan macluumaadka qaar si loo waafajiyo baahiyahooda ama waxa ay aaminsan yihiin.
Tani waa, feker ahaanteyda, maxay sababta Email Scrolling blog post ee SvN u ahayd jaahil. Waxay doorteen inaysan baarin ama aysan bixin macluumaad sax ah oo lagu taageerayo aragtidooda. Xaqiiqdii, taasi waxay ku habboon tahay baahidooda tan iyo markii ay ku xirnaayeen qaabkooda cusub ee emaylka.
Apr 9, 2007 at 2: 04 PM
Waan ku taageersanahay aragtidaada… waana tan tan kale ee soo ifbaxday maalmahaygii American Express - si loo tijaabiyo aragtida ah "isticmaaleyaashu ma rogaan". Waxaan haystay URL-yo kala duwan oo lagu lifaaqay xiriiriyeyaasha dusha sare ee emaylka iyo kuwa salka hoose, sifiican, si fiican, "ka hooseeya laabka." Kuwii hoose ayaa la riixay sidoo kale kuwa kore. Waxay ka hadlaysaa tayada iyo u qummanaanta waxa ku jira. Haddii mawduucaagu aanu khusayn, isticmaaluhu wuu ku ogyahay baaritaanka ugu horreeya sidaas darteedna isaga tag isagoon waligaa akhrin wax badan. E-maylkeyga oo ay kujiraan ilo, tusaalooyin, iyo sida loo sameeyo kaararka xayeysiiska ganacsiga yar yar, halkii aad kaheli laheyd xayeysiinta ama xayeysiinta, marwalba waxaan arkaayay qadar fiican (yacni ilaa 70%) ee qasabadaha waxay ka imaanayaan xiriiriyeyaasha salka hoose ee emaylka.
Waxaan sidoo kale isku dayay basecamp mashruuc macmiil, intii aan ku dhajinay dukumiintiyo badan maktabada / keydka, waxaan kudhameeyay inaan macaamilka u badalo dukumiintiyada google halkii. waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga.
Apr 9, 2007 at 3: 39 PM
Maxaad ugu wacaysaa qof JAHLI ah ra'yigooda ku saabsan dhererka emaylka? Erayo aad u qurux badan ayaa jira oo loogu talogalay qof fikradiisa shaqsiyeed. Haddii aadan jeclayn ra'yiga qof, waa maxay qiimaha ay ku fadhido qorista qoraal dheer oo ku saabsan oo ku soo jiita feejignaantaada xun ee tilmaamaysa jahliga dadka? HELI KA HELI.
Waxaad ku sameyneysaa dhibaato aad u weyn hal qof oo dhibic kahelaya khibradiisa shaqsiyeed! Fadlan, noqo qofka weyn oo horay usoco.
Apr 9, 2007 at 3: 51 PM
Waxaan hubaa in su'aalahaas mar horeba laga jawaabay.
Apr 9, 2007 at 6: 23 PM
Dad ma tihiin kuwo maankiina ka baxay?! Waxaan xoog badan galiyaa sidii aan kuheli lahaa dariiqooyin shaqaalahaygu ay kuqaadan karaan waqti yar kubixinta emailada, halkii aan kadhigi lahaa waxbadan Si aad uhesho barta: E-maylku hadda waa mashquul aan la xakamayn karin. Waa maxay sababta, Dunida, qofna ma soo jeedin karaa in qotodheer emaylku yahay muuqaal la jecel yahay?
Apr 9, 2007 at 6: 47 PM
Shaqaalaha ku lumiya waqti yar emailka iyo waqti badan oo taleefanka ah ama waji ka waji waa wax soo saar badan, waan ku raacsanahay.
Waxaan jeclaan lahaa inaan yareeyo mugga emayllada aan haysto kala badh, laakiin dhererka waxyaabaha ku jira emaylladaas ayaan ahayn sidii la gooyey oo u qalalay. Waxaan u maleynayaa inay jiraan sababo sax ah oo loo haysto nuqul dheer iyo nuqul gaagaaban. html iyo qoraalka, iwm.
Haddii aan dooneyno inaan waqti ku lumino akhriska, aan iska fogeynno qandaraasyada iyo waxyaalaha kale ee sharciga loo yaqaan mumbo jumbo. Waraaqahaasi waxay luminayaan waqti aad u badan waxayna nagu kacayaan wax badan oo saacad ah si aan u siino qareennada si ay u kala gartaan!
Apr 9, 2007 at 8: 29 PM
Hagaag, waxaan isku dayay inaan u isticmaalo basecamp mid ka mid ah mashaariicda mana jiro saaxiibaday oo aan iibsaday. Waxaa laga yaabaa inay ahayd dabeecadda shirkadeed ee mashruuca, laakiin waxaan ogaaday in kasta oo aan diyaar u ahay inaan waqtiga geliyo si aan u fahmo is-dhexgalka murugsan, haddana dadka intiisa badani ma ahayn.
Runtii way adkayd in wax laga beddelo dhacdooyinka haddii shaqooyinka qaarkoodna midba midka kale uu ku tiirsan yahay, oo aad seegto dhawr waxyaalood ma jirin hab dib loogu habeeyo hawlaha iwm.
Waan ku faraxsanahay inaan kaliya isticmaalay nooca bilaashka ah ee aanan u goynin anigoo iibsanaya nooc lacag ah. Muddo ka dib, waxaan ahaa kan keliya ee isticmaala sabuuradda iwm, iyo isticmaalka astaamo kale oo gaar ah oo ku saabsan nidaamka IM (mid kale oo ka mid ah wax soo saarkooda). Tijaabinteennii saldhiga sida a maareynta mashruuca ee quasi waxay ahayd fashil aad u xun. Iskuxirku waa nooc sir ah oo aan iswaafaqsaneyn (sida 8 bilood ka hor - maanan galin dhowaan waxaan qabaa)
Waxaan u maleynayaa inay aad u dhadhaminayaan koolaid kooda isla markaana wadadeyda oo dhan ama wadada weyn aysan shaqeyn doonin mustaqbalka fog. Waxaan ula jeedaa, haddii aad qiraneyso inaad macaamiishaada ka horreysiineyso, markaa sidee u yareyn kartaa ku dhowaad wadiiqo kasta oo aad wax walba uga sheekeyn kartaa sidii aad runta oo dhan u taqaanno oo dadka kale oo dhami ay yihiin mooro. ?
Apr 9, 2007 at 9: 27 PM
"F-bam"? Muxuu yahay xayeysiiska
Waxaan hubaa in 37da calaamadood ay daneeyaan in xoogaa indho indho dhalaalaya ah oo ku jira suudku uusan raadineynin inuu leefleefiyo aagooda *** s.
Ha walwelin… Waan hubaa inaad heli doontid baangad cusub oo aad ku booddo hadda oo 37signals aysan moodda dambe sii socon doonin.
Apr 9, 2007 at 9: 54 PM
Hoog Frank! "Turd in suud ah" - taasi ayaa iga dhigtay inaan qoslo. Fadlan ka raali noqo wax ka beddelka, akhristayaasheyda kale ma jeclaan karaan kaftanka.
Apr 10, 2007 at 4: 44 AM
Waxaan ku isticmaalay Basecamp labadii shaqabixiye ee iigu dambeeyay. Aad ayaan u dhaleecayn jiray, badanaa sababtoo ah Jason Fried & co waa kuwo aad u qurux badan oo si hufan dhammaan barnaamijyadooda waa isku xog uruurin leh UI gadaal u yara yara duwan. Intii aan ka cabanayay iyaga, sidoo kale waxaan ahaa kan ugu isticmaalka badan basecamp. Marar badan ayaa la i weydiin lahaa "meeye dukumentiyadii tan?" oo waxaan ku jawaabi lahaa, “Basecamp… halka ay ku habboon tahay… sax?” Ugu dambayntiina kii labaad ayaa igu kalifay inaan sameeyo wiki maxalli ah, kaas oo helay a badan adeegsi badan maxaa yeelay sida muuqata way adagtahay in laga helo aqoonta kaydinta macluumaadka baloog-qaabeedka. 🙂
Tan iyo markii aan bilaabay freelancing, waxaan ku fikiraa inaan tago oo aan helo koontada basecamp oo aan dhigo, anigoo sugaya inay lagama maarmaan noqoto. Wali lama noqonin lama huraan… hadana waxaan u maleynayaa inaysan u baahneyn.
Apr 10, 2007 at 5: 03 AM
Si buuxda uma hubo arrintan, laakiin f-ereyga-adeegsi ahaan waxaa xoogaa u waxyooday filimkii Masaska diyaaradda lagu isticmaalay ee ereygan gaarka ah si xad-dhaaf ah u isticmaalay. Filimka mararka qaarkood waxaa loogu yeeraa "Abeeso diyaaradda af ****** g ah" tan awgeed.
Waxba igama gelin in dadku ka habaaraan mareegta illaa inta ay ku jirto xadka iyo macnaha guud. Haddii kale, waan iska indhatirayaa.
Apr 10, 2007 at 7: 30 AM
On 24, oo ah riwaayad loogu talagalay qoyska oo dhan, looma oggola inay caytamaan. Muujinta kaliya ee la oggol yahay ee jahwareerka ayaa ah "Nacalaa" - taas oo ku dhiirrigelisay qaar ka mid ah ardayda jaamacadda inay bilaabaan ciyaar cabitaan ah markasta oo Wakiilka Bauer uu adeegsado weedhaas.
Markii ay qorayaashu ogaadeen arintan, waxay bilaabeen khadadka quudinta "damnit damnit damnit" kaliya si ay u arkaan caruurtaas oo faaruqinaya 3 xabadood oo isku xigta.
Kaliya si aan ugu soo celiyo waxoogaa kaftan ah dooddan.
Apr 10, 2007 at 8: 51 AM
Falcelintayda ku saabsan "Helitaanka Real" ayaa laga yaabaa inay ahayd mid dhicis ah laakiin waxay noqoneysaa mid ku habboon: Mawduucoodu waa sida ay u fiican tahay inuu noqdo 37signal iyo inaan ka iibiyo $ 19 PDF kuwa waaweyn ee aan la maydhin.
Isha ku hay ORGware
ogeysiis, soooon. Waxay noqon doontaa ilaha aad raadineyso.
Waa kan Guddiga La-taliyayaasheena.
Apr 10, 2007 at 9: 09 AM
Waxay ku noolaayeen seefta, oo hadda, si fiican… ..
Apr 10, 2007 at 9: 46 AM
F *** adiga Douglas Karr. Ma aaminsani in daqiiqad ah 'f-bam,' sida aad si qosol leh uugu qortay, ma ahayn sababtii aad u tuurtay barnaamijka. Inta badan maqaalka waxaad ku qaadatay inaad iskudajiso inaad naga dhaadhiciso inaysan ahayn oo aad si muuqata u fashilantay. Waxaan u maleynayaa in nin kasta oo si hoose u hadla, oo aan waligiis fikrad ka helin 'blogger technology' blogger, uu u gudbin lahaa waxyaabaha uu ka walaacsan yahay haddii ay jiraan wax.
Markaad tahay 'khabiir ku takhasusay tikniyoolajiyada suuq-geynta', waxaad u badan tahay inaad iibiso saliidda masaska. Inta aan sheegi karo, waa inaad aad uguxun tahay.
F *** adiga Douglas Karr. Runti waad u muuqataa sidoo kale goofy
Apr 10, 2007 at 12: 55 PM
Runtii ma waxaan u muuqdaa goofy? Dang, taasi waxay ahayd sawirkeygii ugu fiicnaa!
Apr 10, 2007 at 2: 03 PM
… Si fiican, waxaan u maleynayaa in aftahannimada jawaabtan ay iska hadlayso nafteeda.
Aniga oo ah akhristaha waqti dheer ee Doug's blog waa inaan jabsadaa si aan u idhaahdo waligiis kuma soo bixin wax goofy.
Jeez, waligey kuma aan soo marin 37 calaamadood, laakiin sida gardarada ah ee loo difaaco, si sax ah ugama jiidan rabitaan ah inaan waxbadan ogaado.
Apr 10, 2007 at 9: 59 AM
@John Beeler: Waad ogtahay in hawshan khaldan ay tahay mid xiiso leh. Waxaan la yaabanahay sababta dhammaan barnaamijyada biraha loo yaqaan ay u egyihiin isku mid oo ay u leeyihiin arrimo ku saabsan adeegsiga daran. (Adiguna waxaa lagaa doonayaa inaad "qaadatid" maxaa yeelay DHH ama qaar kale oo pontif wannabe ah ayaa kuu sheegay sidaas ..)
@deffenders of the cult: SvN iyo kuwa kale oo ka tirsan shirkadan waxay asal ahaan hoos ula hadlayeen dadka. D.Karr wuxuu leeyahay dhibic? mee xogtii ama dukumintigii taageeraa? Haa, waan arki karaa barta ah in EMAILS-KA DIIWAANGELINTA, ay ka caawinayso inay ka dhigto mid kooban oo ujeedka ah, laakiin waad ogtahay, emaylka diiwaangelintu sidoo kale waa muhiim dadkuna waxay leeyihiin caqli ku filan oo ay ku xisaabtamaan kuna kala hormaraan taas.
Shakhsi ahaan, markaan ka helo e-mayl diiwaangelin ah, dheh adeeg bixiye martigelinaya, oo 3 bog dheer, dhib ma leh, ma doonayo 4 emayl oo kala duwan mid ii sheegaya koontada ayaa la dejinayaa, mid kalena wuxuu ii sheegayaa qolofkayga id kale ayaa ii sheegaya meesha laga helo caawimaad iyo adeegga macaamiisha iyo mid kale oo ii sheegaya cinwaanka urgui ee webgui si aan u maareeyo koontadayda. Taasi waa waddo aad u fara badan.
Waxa aan ka ogaaday 37S waa inay ku xad gudbaan xeerarkooda taasna waxay ku faaftaa Rails iyo SvN iyo dhammaan qaraabada kale ee ay taageeraan (TextDrive iyo Textmate qofna?) Oo ay riixaan iyagoon shaaca ka qaadin xiriirkooda maaliyadeed ee shirkadahaan.
Xadiladu waxay sheeganayaan inay qallalan yihiin laakiin waa kaftan naxdin leh! barnaamij kastaa wuxuu ubaahanyahay nuqul u gaar ah qaabka! ma garataa saameynta arintan? Bal u fiirso meelaha loo yaqaan 'RailsDay2006'. Dhowr boqol oo galitaan ayaa qaadan doona ku dhowaad 1.5 GB oo boos ah!
Tani waa xadgudubka ugu xun ee mabda'a qalalan.
Apr 10, 2007 at 1: 30 PM
Waxaan arkaa inay durba dood badani ka jirto halkan, laakiin waxaan moodayay inaan ku daro labadayda santi. Habaar uma qabo habaarka. Runtii waan jeclahay fikradda. Fikradda guud ee ereyada qaarkood ka xanaaq badan kuwa kale ayaa ah doqonimo.
Laakiin taasi maaha arrinta ugu weyn. Xaqiiqdii waan ka arki karaa arinta ragga SvN. Haddii aad wax sheegto, ku sheeg si xukun leh oo ha ku sharraxin tan s *** taasi waxay umuuqataa inay tahay wax caadi ah. Haddii aad wax ku qanacsan tahay, sidaas u dhah, oo ha ku odhan wax kale.
Si kastaba ha noqotee, waxaan ku dari lahaa wax aan u maleynayo inuu ku maqanyahay xaaladdan. Haddii aad wax ku qaldan tahay, ka dib qir oo horay u soco. Wax xun oo qalad laguma helo. Way yara xanaaqi kartaa, laakiin si loo helo waxa saxda ah waa u qalantaa. Hadaad qaadato fikirka ah 'waan saxanahay taasna waa taa' waxaad ka tagtay wadada caqliga waxaadna gashay boqortooyada dogma. Ma dhahayo ragga SvN ayaa sidaas sameeyay. Sida iska cad, aad ayaa looga fekeraa waxa ay qabtaan, oo si fiican ugu shaqeeya iyaga.
Qodobka kale ee aad ku qortay boostadaada asalka ah, oo aan u maleynayo inay mudan tahay in lagu celiyo waa sameynta sheegashooyin iyada oo aan xog laga helin. Aad ayey muhiim u tahay in xogta la helo. Caqliga saliimka ahi ma aha wax caadi ah, oo, sida waayo-aragnimadu ina bartay, waxay noqon kartaa mid aad u qaldan mararka qaarkood sidoo Mid ka mid ah su'aalaha ugu muhiimsan ee qof uu weydiin karo ayaa ah: "Haa, tani macno ayey samaynaysaa, laakiin miyey ka tarjumaysaa xaqiiqda (xogta halkaas ma ku jirtaa)?"
Ma awoodin inaan dadka aan lashaqeeyo u adeegsado basecamp, laakiin ma hubo inay khasab tahay inay tahay dhibaato Basecamp, ama in dadka badankood aysan u baran / diyaar u ahayn inay adeegsadaan codsi khadka tooska ah ku jira. Hubaal, dadku waxay adeegsadaan e-mayl iyo codsiyo kale iyagoo aan si dhab ah uga fikirin, laakiin inay u adeegsadaan si joogto ah waxay u baahan tahay tababar dhab ah, illaa aad ku dheganaato mooyee, waxay u muuqaneysaa wax aan dabiici ahayn. Waxaan ka shaqeeyaa Jaamacad macallimiinta / shaqaalaha halkan joogaana waa kuwo matalaya arrintaas. Iyagu si fudud ugama baran inay haystaan ​​ilaha jira ee hadda la heli karo, mana qaadan doonaan waqti ay dhab ahaantii ku bartaan. Marar badanna xitaa uma baahna.
Apr 11, 2007 at 9: 19 AM
Waxaan isku dayay inaan ka iibiyo Basecamp macmiil hal mar, waxay doorteen * habka gacanta * ka dib markay hubiyeen.
Apr 11, 2007 at 12: 25 PM
Douglas - haddii aad raadineyso caymis la'aan, HTML-e-mayl awood u leh deegaanka waxaad baari kartaa maareynta hoggaankayada iyo wax soo saarka iibka - http://LeadsOnRails.com. In kasta oo aanu ahayn barnaamij desktop ah, haddana way sii socotaa oo waa laga sii dhisayaa jawaab celinta macaamiisha dhabta ah ee dhab ahaan u dhagaysta isticmaaleyaasha sida adiga oo kale.
Apr 11, 2007 at 3: 11 PM
Waxaan u maleynayaa in qeyb ka mid ah oo leh 37s ay tahay DHH.
Qiyaastii sanad ka hor ayaa qoraal lagu qoray boggiisa gaarka ah (xaragsan.com) asal ahaan dharbaaxa barnaamij kasta oo doorbidaya inuu helo shaqo 9-5 halkii uu ku biiri lahaa bilowga iyo isticmaalka biraha Waxay ahayd isla aragti aan toos ahayn (illaa iyo intaad ka dhejin karto dhawaaqa qoraalka bogga) - haddii aadan igu raacsanayn waxaad tahay doqon.
Apr 22, 2007 at 7: 11 PM
Waxaan xasuustaa markii aan arkay qoraalkan sanad ka hor laakiin ma ahayn buuqii ka dambeeyay. Waqtigaas waxyaabo kale ayaa maskaxdayda ku mashquulsanaa laakiin hadda oo aan dib ugu noqday tan waa inaan idhaahdaa 37 Tallaabooyin signaal ah ayaa dhadhan xun ku reebay afka.
Waxaa jira wax la socda dabeecadooda. Haa isyeelyeeliddu waxay noqon kartaa sharraxaad wanaagsan. Waxaan ku sugnaa dhamaadka helitaanka qaar ka mid ah waxyaabo aan caadi aheyn oo aan waxtar lahayn oo emayl ka soo jeeda Jason oo waxaan ahay isticmaale caadi ah.
Awooddooda ayaa hubaal ku jirta calaamadeynta taasna waan ugu hambalyeynayaa. Laakiin ficilada sidan oo kale ah iyaga ayaa waxyeello u geysanaya iyaga oo si cad uga badan sida ay iyagu ogaadaan ama u daryeelaan qirashada.
Waxa Matt ee 37S uusan u muuqan inuu xaqiiqsanayo ayaa ah in ficilada / waxyaabaha / walxaha ay wataan * macno *. Haa kaliya soo xigashada qof ayaa loo qaadan karaa inuu yahay weerar, jees jees ama wax kasta. Isaga oo leh "waligeen ma dhihin…." ma fiicna. Waa wax aan caadi aheyn oo maskax furan. Is-hoosaysiinta qaar ayaa aad u socota. Waad heli kartaa taas oo aad sii wadi kartaa "inaad ka duwanaato".
Markaan u soo jeesto wax soo saarkooda, waxaan u joojiyay isticmaalka Basecamp si dhab ah maxaa yeelay sida dad badan waxaan u arkay in dadka kale aysan runtii daneyneyn. Waxaan u maleynayaa soo bandhigida “fudud” inay caqabad noqon karto. Dadku ma arkaan awoodda ama sababta ay tani uga wanaagsan tahay taxanaha emayllada. Waxaanan ka hadlayaa dadka caadiga ah ee halkan jooga oo runtii ka faa'iideysan doona joojinta emaylka daadadka. Waa badeecad wanaagsan laakiin waxay u baahan tahay nasiin, taas oo Jason uu sheegay inay imaaneyso iyada oo laga jawaabayo ammaankayga wax ku oolka ah ee ku saabsan Highrise.
Si kastaba ha noqotee waxaan rajeynayaa inaysan ku nasan doonin markale. Waxaa jira aagag yar oo cad oo ku yaal Highrise oo ay u baahan yihiin inay wax ka qabtaan iyo macaamiil lacag bixiya - mar labaad - aad ayaan ula socon doonaa iyaga.
May 13, 2007 at 4: 34 PM
Farriin weyn! Aniguba waan tirtiray akoonkeyga basecamp dhawaan. Ha ku degdegin inaad u beddesho barnaamijka desktop-ka, hase yeeshe, waxaa jira beddello saldhig baseed wanaagsan oo wanaagsan oo hadda la heli karo: Goplan iyo OnStage oo kaliya in la magacaabo wax yar.
Aug 16, 2007 at 1: 19 AM
Gacaliye SirZ, aan wajahno: marna ma dooneyno inaan ka wada hadalno aaladda ay ku qoran yihiin boggooda haddii aan si buuxda ugu qanacsan nahay. Waxaan isku dayay basecamp waxaanan u arkay inay gabi ahaanba ku khaldan tahay mashaariicdeena. Maaha qalab maaraynta mashruuca kadib oo dhan. Ka eeg maqaalkan PCworld.com. Waxaan u maleynayaa inaan u wareego tan Doqon qalab, waxay umuuqataa runtii xiiso badan.
Tifatiraha @ WhyBaseCampSux.org
Oktoobar 29, 2007 at 2:07 AM
Hehe. Ku wacdinta kooxda heesta. Hagaag, marka laga reebo qaybta ku saabsan asal ahaan inaad tahay taageere 37Signals; Marnaba ma ahayn.
Kuwa raadinaya beddelka Basecamp waxaan ku soo uruuriyay liis aad u tiro badan barta My bitcamp halkan:
Waxaan rajeyneynaa inay taasi caawinayso kuwa raadinaya xalalka maareynta mashruuca ee aan ka ahayn Basecamp.
Oktoobar 29, 2007 at 7:48 AM
Si la yaab leh, waxaan ahay macmiil shirkad isticmaasha Basecamp hadda. Ma aqaano inaan waligay idhi way nuugtay… Waxaan dareemay uun inay helayaan buunbuunin badan oo aan ku noolaanayn.
Sida aan hadda u isticmaalayo, farqiga ugu weyn wuxuu ku saabsan yahay maaraynta howlaha iyo shaqooyinka. Waxaan jeclaan lahaa inaan mudnaanta siiyo howlaha, u qoondeeyo, oo aan helo qiyaaso ku saabsan dhameystirka (saacadaha iyo taariikhda) ka dibna aan ku helo xaalad (50%, 75%, 100%). Tilmaamaha hadda jira ayaa u oggolaanaya qof walba inuu mudnaanta siiyo oo uu wax u qoro.
Wax yar ayaan la sii joogay, laakiin ugu dambayntii waan la qaatay nimankan. Xaqiiqdii waxaan ku dhajiyay booskeygii ugu dambeeyay sabuuradooda maanta (hoos ayaa lagu soo saaray):
“Hagaag, ugu dambeyn waa inaan joojiyaa koontadayda. Aniga ahaan markaad eegto waxqabadka HR iyo xaddidaadaha ay dul dhigayaan xisaabaadka heerarka hoose, waxaa jira kaliya xulashooyin fara badan oo bilaash ah ama qiimo jaban oo halkaa kusii socda Xitaa way ka qaalisan tahay haddii aad rabto inaad ku isticmaasho alaabada kale ee 37-da ah sida Boorsada dhabarka iyo / ama Basecamp. Halkii aad ka qaadan lahayd hal shey oo aad ka sii wanaajin lahayd (tusaale. Ku darista shaqeynta HR ee Boorsada) 37s waxay umuuqataa inay doorteen waddo aad kubixineyso lacag aad u badan waxay noqoneysaa mid aan la tartami karin oo xitaa ma jiraan wax is dhexgal ah oo ka mid ah alaabada. Waxaan sidoo kale ku daalay "waxaan ognahay waxa ugu fiican dabeecadda" iyo macaamiisha soo jeedinta soo jeedineysa. Waa wax laga xishoodo maxaa yeelay tan iyo markii la helay boorsada dhabarka, 37s waxay ii qabteen wax badan oo ballan ah, laakiin taasi nasiib darro way libdhay. ”
Jan 27, 2008 saacadu markay ahayd 2:02 PM
Qoraalkani waxoogaa ayuu ciyaarayay laakiin waxaan doonayay inaan helo 2 senti. Waxaan aad ugu tiirsan nahay barnaamijkeena PM. Fowdadiisa waa haddii aynaan macaamiisheenna ku mashquulin iyo kooxdayada. Ku tiirsanaantaas darteed waxaan u adeegsanaa Vertabase. Waxay na siiyaan adeeg macmiil oo weyn, tababar waxayna diiradda nagu hayaan - sida ay alaabooyinka SaaS wanaagsan u leeyihiin.
Nov 25, 2008 saacadu markay tahay 5:12 PM
FWIW, waxaan hadda ka guurnay Basecamp una guurnay SharedPlan. SharedPlan Central wuxuu diiradda saarayaa dhinaca qorsheynta oo leh taageero fulin hufan. Jaantusyada 'Gantt', marin la'aanta barnaamijka abka ah ee loogu talagalay Mac iyo Windows illaa iyo hadda, isla weyni la'aan; ->
Febraayo 26, 2009 saacadu markay tahay 4: 35 AM
Ku dhowaad laba sano ka dib qoraalkan, waxaan xiiseynayaa inaan maqlo waxa aad u isticmaaleyso maareynta mashruuca / raadinta shaqada maanta.
Miyaad weli ku qanacsan tahay (aragtida xalka) go'aankaaga inaad ka guurto Basecamp?
Waxaan aragnay dad aad u tiro yar oo jidkayaga ka yimaada (http://www.smartsheet.com) Laga soo bilaabo Basecamp sanadkii la soo dhaafay, qaar ayaa sheegaya sababo la mid ah wixii aad markii hore soo dhigtay. Qaar kale waxay umuuqdaan inay raadinayaan xalka khadka tooska ah kaas oo kayar-riix-eded.
Feb 26, 2009 markay ahayd 2:16 PM
Tani waxay noqon doontaa su'aal aan dhowaan ka jawaabi doono, calaamadee. Xaqiiqdii waan hubaa inuusan noqon doonin Basecamp - Waxaan aad ugu soo jiitay xalalka SaaS ee si xoog leh u kaxeeya astaamo badan iyo isdhexgalka barnaamijyadooda. Xilligan, ma sameynayo wax maarayn mashruuc ah - laakiin taasi waa inay is beddeshaa dhowaan.
Baadhid http://www.teamworkpm.net - Waxay leeyihiin soo dejiye Basecamp oo nimankani waa ROCK! Waxay qaateen Basecamp ugu dambayntiina waxay ku dareen dhammaan waxyaabihii aan weydiisanaynay.
May 11, 2009 at 5: 20 PM
Saldhig ku yaal Steroids, laga jaray 37s fluff 🙂
Jun 15, 2010 saacadu markay ahayd 10:18 AM
Waxaan dareemayaa xanuunkaaga ku saabsan maareynta mashruuca, waan jeclahay wax badan ayeyna iga caawineysaa markaan sameynayo isku dheelitirka horumarinta websaydhka. Joomla waxay leedahay mid weyn oo ku aadaya dhabarka goobta oo laga mari karo xagga hore. Waxaan iska daayay dejintan degellada macaamiisha, umana muuqdaan inay adeegsanayaan. Waa wax aad u fiican in la wada ilaaliyo hantida goobta!
Waxaan eegi doonaa iGTD oo aan raadinayay wax sidan oo kale ah waana ku faraxsanahay qalabkan
Nov 10, 2010 at 4: 23 AM
Waan ka xumahay halkan jahwareerkaaga. Sooftiweerku wuu ka badan yahay tiknoolajiyadda… wax walba waa wax ku saabsan dadka ku jira khadka badhanka Shaqaale ahaan iyo isticmaale ahaan, waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad fiiriso Clarizen, abaalmarinta ku guuleysatay 2010 Software Project Software Software.
Software A awood leh oo leh waxyaabo badan sida maareynta waqtiga, maareynta kheyraadka, maareynta dhaqaalaha iyo isdhexgalka SalesForce, Attask, Google….
Mudan in la fiiriyo ..
Jan 13, 2011 saacadu markay ahayd 6:58 PM
Hagaag, maanta laga bilaabo waxaan ku laabtay Basecamp! 🙂 Waad ku mahadsan tahay @howeleadership oo ila hadlay!
Doug ma isku dayday mid ka mid ah tartamayaashaas mudan ee hoos ku dhajiyay ka hor intaadan dib ugu laaban saldhigga xerada. Shakhsiyan aad ayaan uga xumaaday abaabul la'aanta iyo kala-goyn la'aanta markii aan ku daray dadka Mac ee Basecamp. Waxaan ugu dambeyntii ku turunturooday xal isku dhafan. Waxaan ugu yeeri doonaa nidaam deegaan ganacsi oo u oggolaanaya la-hawlgalayaasha, macaamiisha, la-taliyayaasha, iibiyeyaasha, kuwa madaxbanaan, xubnaha guddiga si ay uga dhex muuqdaan daruuraha iskaashi ee daruuriga ah.
Badeecada aan isticmaalayo waxay leedahay qayb weyn oo mashruuc / maarayn maamul ah, jadwal jadwal, geedi socodka dib u eegista socodka shaqada, maareynta xiriirka, shirarka, wada sheekaysiga tooska ah, shirarka kaamirada websaydhka, wadaaga shaashadda oo ah astaamo loo qoondeyn karo dadka isticmaala iyo kooxaha. qabow Isku day a http://www.same-page.com
Jan 13, 2011 saacadu markay ahayd 7:09 PM
FYI - Kaliya "hoos baan u soo booday". 🙂
Feb 25, 2011 markay ahayd 9:49 PM
Fariin Cajiib ah! Waxaan isku dayay inaan uruuriyo macluumaadka sidan oo kale ah shirkadayda waxaanan qoray boggeyga gaarka ah ee ku saabsan sababta aan ugu dheggan nahay Basecamp. Iska hubi haddii aad u janjeerto: http://lab.neo-pangea.com/blog/2011/02/basecamp-sucks-less-than-everything-else/
Shakhsiyan, waxaan isticmaalaa Basecamp maxaa yeelay way u fududahay kooxdaydu inay korsato. Waxaan u maleynayaa inay lagama maarmaan tahay in la helo barnaamij maareyn mashruuc oo daruur ku saleysan.
Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku hubiso ra'yigayga ku saabsan Basecamp, iyo kan sii fiicnaanaya Wada shaqeyntaPM
May 8, 2011 at 6: 37 AM
Waxaan u adeegsanaa basecamp barnaamijka 'Social Media Magic' si aan ula wadaagno fikradaha isla markaana ula socono xiriirka macmiilka Wax arrimo ah oo naga dhexeeyey ma jiraan. Xaqiiqdii anigu ma ihi inaan waxbadan aqriyo boggooda, laakiin waa macquul taasi waxay ahayd fikirka qoraagaas gaarka ah. Uma oggolaan lahaa ra'yiga hal qoraa inuu iga leexiyo dalabkan faa'iidada leh. Sidee buu kuu shaqeeyaa arjiga cusub? Waxaan rajeynayaa inaan kula xiriiro mustaqbalka!
Jul 20, 2011 markay ahayd 8:27 AM
Waxaa jira horumarro badan oo dhanka isticmaalka ah oo lagu sameyn karo Basecamp. Waxaan layaabay inaysan jirin urur intaa ka sii badan oo lagu dhex dhisay. Qaabka ay u shaqeyso ma jirto meel cad oo waxyaabo qaas ah ay ku dambeeyaan sidaa darteed isticmaaleyaasha cusub ee soo galaya mashruuc la aasaasay waa inay la xiriiraan qof kale si ay u ogaadaan halka ay wax ka helayaan. (Haa, Mararka qaar waxaad ka heli kartaa waxyaabo raadin laakiin had iyo jeer maahan.)
Waxaan kula socdaa adeegsiga ereyga 'f'. In kasta oo xitaa mararka qaarkood aan u oggolaado ereyga cuss in uu siibto haddana cudurdaar ma leh in aan la qaban taas marka aad wax qoraysid. Waxaan aaminsanahay inay ixtiraam darro u tahay akhristayaashaada oo aysan ku habbooneyn shirkad isku dhafan. Xaqiiqdii waxaa jira meel ay ku kala duwan yihiin sida aad u hadasho markii aad la maqashid asxaabtaada sakhraansan iyo waxa aad bulshada kula wadaagto.
Aug 19, 2011 at 12: 03 AM
Yaa! Kaliya arag boostadan oo aqri inta badan faallooyinka. Saraawiil farabadan oo farabadan. Waxaan dhawaan bilaabay isticmaalka Basecamp waxaana jira waxyaabo yar yar oo iga khaldama. Mid ka mid ah iyaga oo ah inaanan rumaysan karin inaan kaliya ku qori karin taariikh, waa inaan ka soo xusho taariikh ka soo muuqashada. Runtii? Miyaan wax khaldan samaynayaa? Waan arki doonaa sida ay wax u socdaan.
Sep 1, 2011 at 6: 23 PM
haah, qoraaladaas boggaga waxay ahaayeen 2007 waxay umuuqataa… taas oo igu hogaamisa wax runtii iga careysiiya. Goorma ayaa qoraalkan la qoray? 2007, 2008, shalay? iyada oo aan la helin khad taariikhda ah sida aan ku ogaanayo macluumaadka aan aqrinayo wali waa mid khuseeya maanta.
Waan hubaa inay jiraan sababo wanaagsan oo aanan loogu darin taariikhda boostada, laakiin marka laga eego dhinaca isticmaalaha, way nuugtaa.
btw, wali waxaan isticmaalaa basecamp - waan ku raacsanahay, waxay leedahay waa wax diidmo, laakiin markii loo adeegsado barnaamijyada kale ee dibada waxaad ka shaqeyn kartaa arrimaha badankood. Marna cabashooyin kama aysan soo gaarin macaamiisha ku saabsan inay adag tahay in la isticmaalo sidoo kale kaliya 2 senti
Sep 2, 2011 at 12: 48 AM
Waxay ahayd dhowr sano ka hor, David. Arin la yaab leh… Waxaan ku soo laabtay Basecamp hada. 🙂
Nov 29, 2011 saacadu markay tahay 5:55 PM
Weli waxaan ahay taageere weyn oo 37signal ah, in kastoo aan tirtiray koontadaydii Basecamp sidoo kale. Waxay abuureen runtii wax soo saar u gaar ah oo dareen leh time wakhtigaas. Hadda wax badan ayaan filayaa. Waxaan dhawaan bilaabay isticmaalka KanbanTool - runtii waan jeclahay is dhexgalka. Waxaan rajaynayaa in maalin uun aan sidan oo kale uga sheegi doono Basecamp.
Apr 19, 2012 at 3: 45 AM
Waxaan isticmaaleynay Basecamp dhowr sano laakiin dhawaanahan (sanad kahor) waxaan ka hirgalinay shirkadeena hawl kale oo lagula socdo raadinta xalka software ka comindware. Shaqeyn badan, fursado badan iyo tikniyoolajiyad jilicsan oo casri ah ElasticData. Haddii aadan wali isku dayin - isku day.
Apr 24, 2012 at 3: 21 PM
Waxaan jeclaan lahaa inaan maqlo waxa aad u malaynayso kaamka cusub. Ma ihi taageere, laakiin waxaan u arkaa UI-ga inuu xiiso leeyahay. Fikradaha?
Apr 24, 2012 at 4: 51 PM
Kama badalin maxaa yeelay waxaa jira xadidaadyo ku saabsan badalashada. Laakiin, dhammaan fiidiyowyada aan ku arkay waxay umuuqdaan xoogaa adeegsi aad u qabow iyo hagaajinta khibradaha isticmaalaha taas oo ka dhigaysa wax fiican oo sahlan in dib loo boodboodo inta udhaxeysa mashaariicda.
Apr 12, 2014 at 9: 08 AM
Haye, New Basecamp waa wax fiican laakiin wali ma lahan muuqaalo badan sida shaxda gantt, luqadaha, sheekaysiga hidaha, raadinta waqtiga, hawlaha hoosaadka iwm.
Apr 14, 2014 at 12: 39 PM
Uma maleynayo inay waligood ku dari doonaan shaxda gantt iyo in si daacad ah aan u rajeeyo maya. Waxaan u adeegsanaa mashaariic yaryar, kooxo yar yar oo aan ku darno jaantusyada 'Gantt' ayaa sababi doona inaan ka dhaqaaqno barnaamijkooda mid ka mid ah tartamayaasha.
18, 2012 at 4: 43 PM
Aad ayaan uga xumahay dadka dhaha “cussing” halkii aan ka ahaan lahaa “habaar.” - waxay umuuqataa in hal milkiile baloog uu qodayay wasakh duug ah si uu xoogaa kabaalayn ah u sameeyo.